Shuruudaha iyo Xaaladaha Dukaanka - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Shuruudaha iyo Xaaladaha Dukaanka
Barista Shatiga Kheyraadka
Isticmaalkaaga alaab shati leh (sida hoos lagu qeexay) waxay si adag ugu xiran tahay Shuruudaha iyo Shuruudaha ku jira Liisanka Kheyraadka Waxbaridda (kan "Liisanka"). Shatigaani waa heshiis sharci ku qabanaya oo u dhexeeya adiga iyo Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta ee la xiriirta Adeegsiga Qalabka Shatiga. Adoo adeegsanaya Waxyaabaha Shatiga haysta waxaad xaqiijineysaa inaad aqbashay Shuruudaha iyo Xaaladaha ku hoosjira Liiskan oo aad ogolaatay inay iyaga ku xirnaadaan. Fadlan si taxaddar leh u akhri Shuruudaha iyo Xaaladaha ku hoos jira Liisankaan.
1.1 Shuruudahaan iyo Shuruudahaan ayaa xukumi doona iibinta iyo bixinta agabka koorsada la soo dejin karo iyadoo loo marayo degelkeena. Waxay sidoo kale daboolayaan isticmaalka xiga ee qalabka koorsooyinkaas.
1.2 Waxaa lagaa codsan doonaa inaad siiso heshiiskaaga qeexan Shuruudahaan iyo shuruudahan kahor intaadan amar ka bixin websaydhkayaga.
1.3 Dukumintigani ma saameynayo xuquuq kasta oo sharci ah oo aad ku yeelan karto macaamil ahaan.
1.4 Siyaasadeena Qarsoodiga ah waxay noqon kartaa halkan viewed.
1.5. Waxaad qiraysaa in maadada kujirta casharrada ay umuuqato mid dadka qaar diidi karaan. Waxay ka hadlaysaa dhaqanka galmada. Dhamaan talaabooyinka macquulka ah annaga ayaa qaadnay si aan u hubinno in aan la soo bandhigin waxyaabo anshax xumo leh. Waxaan sidoo kale hubinay inuu luuqadu u dhigmo maadada ay ka hadlayaan caruurta. Markaad aqbasho Shuruudahaan iyo shuruudahan waxaad aqbashaa halista wax kasta oo raaxo darro ama dareemo dhaawac ah oo ka dhalan kara diyaarinta casharka ama bixinta.
1.6 Si looga fogaado shaki, Liisankaan loo adeegsanayo agabka ma siinayo lahaanshaha qalabka shatiga loo haysto.
2.1 Shuruudahaan iyo Shuruudahaan:
(a) "annaga" waxaa loola jeedaa The Reward Foundation, oo ah Hay'ad Iskudhis ah oo loo yaqaan 'Scottish Charitable Incorporated Organisation' oo hoos timaada sharciga Scotland oo leh lambar sadaqo SCO44948. Xafiiskayaga diiwaangashan waa: Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh EH2 2PR, Scotland, United Kingdom. (iyo "annaga iyo" kuweenna "waa in loo fasiraa si waafaqsan);
(b) "adiga" macnaheedu waa macmiilkeenna ama macaamilkeenna mustaqbalka ee ku hoos jira Shuruudahaan iyo Shuruudahaan (iyo "kanaga" waa in loo fasiraa si waafaqsan);
(c) "qalabka koorsada" waxaa loola jeedaa qalabka koorsooyinka ee loo heli karo iibsashada ama soo dejinta bilaashka ah ee boggeena;
(d) "qalabka koorsadaada" waxaa loola jeedaa wixii agab ah ee koorsada ah ee aad ku iibsatay ama ku soo degsatay bilaash degelkeenna. Tan waxaa ka mid ah nooc kasta oo la xoojiyay ama la casriyeeyay oo ka mid ah maaddooyinka koorsada oo aan kuu soo bandhigi karno waqti ka waqti;
(e) "Shati" wuxuu leeyahay macnaha lagu sheegay hordhaca shatigan; iyo
(f) “Waxyaabaha Ruqsad haysta” waxaa loola jeedaa shaqada farshaxanka ama suugaanta, sawirka, fiidiyaha ama duubista codka, keydka xogta, iyo / ama agab kale oo uu ku siiyay shati-bixiyuhu si loogu isticmaalo Liiskan. Ruqsad-bixiyaha waxaa loola jeedaa The Reward Foundation, oo ah Hay'ad Iskuduwaha Isku-xirka Iskotishka ee hoos timaada sharciga Scotland oo leh lambar sadaqo SCO44948. Xafiiskayaga diiwaangashan waa: Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh EH2 2PR, Scotland, United Kingdom.
(g) “Shatiga Shaqsiyeed” waxaa loola jeedaa Shatiga uu qof ku iibsaday, ama uu ku aqbalay qaab bilaash ah, si loogu isticmaalo waxbarashadiisa. Looma wareejin karo dadka kale, iskuul ama xarun.
(h) "Shatiga Isticmaalayaasha Badan" waa Shati iibsaday, ama lagu aqbalay qaab bilaash ah, iskuul ama hay'ad kale taas oo loo diyaarin karo si loogu isticmaalo shirkadda si loogu bixiyo adeegyo waxbarasho.
3. Dalbo nidaam
3.1 Xayeysiinta maaddooyinka koorsada ee ku yaal websaydhkeennu waxay ka dhigan tahay "martiqaad daaweyn" halkii laga heli lahaa heshiis qandaraas ah.
3.2 Ma jiro wax heshiis ah oo naga dhexayn doona adiga iyo annaga iyo illaa aan ka aqbalno amarkaaga mooyee iyo Tani waxay la jaanqaadi doontaa nidaamka ku xusan Qeybtan 3.
3.3 Si aad heshiis uga gasho boggayaga internetka si aad uga iibsato ama aad uga hesho agab koorso bilaash ah oo nala soo dejiyo, talaabooyinka soo socda waa in la qaadaa. Waa inaad kudartaa maaddooyinka koorsada ah ee aad rabto inaad iibsato Basket-kaaga, ka dibna u gudub Iibsiga; haddii aad tahay macmiil cusub, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad akoon nala sameysato oo aad gasho; macaamiisha gaarka loo leeyahay, Xisaabaadka waa ikhtiyaari, laakiin waa ku qasab macaamiisha shirkadaha; haddii aad tahay macaamil jira, waa inaad gashaa faahfaahinta gelitaankaaga; marka aad gasho, waa inaad ogolaataa shuruudaha dukumintigan; waxaa lagugu wareejin doonaa websaydhka bixiyaha adeegga lacag-bixinta, iyo bixiyaha adeegga lacag-bixinta ayaa maamuli doona bixintaada; ka dib waxaan kuu soo diri doonaa xaqiijin amar ah. Waqtigan xaadirka ah amarkaagu wuxuu noqonayaa qandaraas qabanaya. Haddii kale, waxaan ku xaqiijin doonnaa emayl ahaan in aanan awoodin inaan la kulanno amarkaaga.
3.4 Waxaad fursad uheli doontaa inaad aqoonsato oo aad saxdo khaladaadka soo gelinta kahor intaadan dalban amarkaaga.
4.1 Qiimaheena waxaa lagu soo qaatay boggayaga internetka. Meesha qiimaha laga soo xigtay £ 0.00, shatiga ayaa wali shaqeynaya, in kasta oo aan lacag laga qaadaynin.
4.2 Waxaan waqti ka waqti beddeli doonnaa sicirka laga soo xigtay degelkeenna. Tani ma saameyn doonto qandaraasyo horey u dhaqan galay.
4.3 Dhammaan lacagaha lagu sheegay Shuruudaan iyo Shuruudahan ama boggayaga internetka waxaa lagu sheegay mid gaar u ah VAT. Wax lacag ah kama qaadno VAT.
4.4 Qiimaha lagu tilmaamay cashar kasta ama xirmo kasta waxaa loogu talagalay shaqsi iibsanaya Shati adeegsiga iyaga u gaar ah.
4.5 Halka iskuulada, machadyada iyo hay'adaha kale ee shirkadaha ay rabaan inay iibsadaan ama ay ku helaan soo degsasho bilaash ah agabkeena koorsada, waa inay iibsadaan Shatiga Macaamiisha Badan. Tani waxay ku kacaysaa 3.0 jeer shatiga shaqsiga. Ka dib waxaa loo isticmaali karaa dugsiga dhexdiisa ama hay'adda mana ku xirnaan doono macallin kasta ama xubin ka tirsan shaqaalaha. Halka qalabka lagu bixiyo bilaash, wakiilka sameeya iibsashada bilaashka ah isagoo ka wakiil ah iskuul, urur ama hay'ad kale oo shirkadeed weli wuxuu u baahan yahay inuu doorto liisanka isticmaale badan si loo hubiyo in xiriir sharci oo ku habboon la dhex dhigay The Reward Foundation iyo liisanka haysta.
5. Lacag bixinta
5.1 Waa inaad, inta lagu gudajiro nidaamka lacag bixinta, aad bixiso qiimaha maaddooyinka koorsada ee aad dalbato. Qiimaha la xushay waa inuu ahaadaa mid ku habboon nooca Shatiga la xushay, Shatiga Shaqsiga ama Shatiga Isticmaalaha Badan.
5.2 Lacag bixinnada waxaa lagu bixin karaa mid ka mid ah hababka la oggol yahay ee lagu qeexay degelkeenna waqti ka waqti. Waxaan hadda kaliya aqbalnaa lacagaha iyadoo loo marayo PayPal, in kasta oo taasi oggolaanayso isticmaalka dhammaan kaararka deynta iyo deynta.
6. Ruqsad siinta qalabka koorsada
6.1 Waxaan kuu soo bandhigi doonaa qalabkaaga koorsada qaab ama qaabab lagu qeexay degelkeena. Waxaan ku sameyn doonnaa hababkaas iyo muddooyinkaas sida ku cad boggayaga internetka. Guud ahaan, dirista emaylka u oggolaanaya soo dejintu waa ku dhowaad isla markiiba.
6.2 Iyada oo ku xiran bixintaada qiimaha la adeegsan karo iyo u hogaansanaanta Shuruudaha iyo Shuruudahaan, waxaan ku siineynaa ruqsad caalami ah, oo aan dhicin, oo aan gaar aheyn, oo aan la wareejin karin si aad u isticmaasho wax ka mid ah qalabkaaga koorsada ee uu oggol yahay Qeybta 6.3, bixinta waa inaadan duruuf kasta ku isticmaalin qalabkaaga koorsada oo mamnuucaya Qaybta 6.4.
6.3 "Isticmaalka la oggol yahay" ee qalabkaaga koorsada waa:
(a) soo degsashada nuqul ka mid ah agab kasta oo koorsadaada ah;
(b) Ruqsadaha Shakhsi ahaaneed: ee laxiriira agabka koorsada qoran iyo garaafyada ah: sameynta, keydinta iyo daawashada nuqulada agabyada koorsadaada ah oo aan ka badneyn 3 desktop, laptop ama kombiyuutarada xusuusta, akhristayaasha ebook, taleefannada casriga ah, kumbuyuutarrada kumbuyuutarka ah ama aaladaha la midka ah;
(c) Ruqsadaha Isticmaalayaasha Badan: ee laxiriira agabka koorsada qoran iyo garaafyada ah: sameynta, keydinta iyo daawashada nuqulada agabkaaga koorsada oo aan ka badneyn 9 desktop, laptop ama kombiyuutarada xusuus qorka, akhristayaasha ebook, taleefannada casriga ah, kumbuyuutarrada kumbuyuutarka ama aaladaha la midka ah ;
(d) Ruqsadaha Shakhsi ahaaneed: ee laxiriira agabka koorsada maqalka iyo muuqaalka ah: sameynta, keydinta iyo ku ciyaarida nuqulada alaabtaada koorsada ah oo aan ka badneyn 3 desktop, laptop ama kombiyuutarada xusuus qorka, kumbiyuutarrada casriga ah, kumbiyuutarrada kumbuyuutarka, qalabka warbaahinta ama aaladaha la midka ah;
(e) Ruqsadaha Isticmaalayaasha Badan: ee laxiriira agabka koorsada maqalka iyo muuqaalka ah: sameynta, keydinta iyo kuqeybinta nuqulada alaabtaada koorsada ah oo aan ka badneyn 9 desktop, laptop ama kombiyuutarada xusuus qorka, kumbiyuutarrada casriga ah, kumbiyuutarrada kumbuyuutarka, qalabka warbaahinta ama aaladaha la midka ah ;
(f) Ruqsadaha Shakhsi ahaaneed: daabacaadda laba nuqul oo mid kasta oo ka mid ah maaddooyinka koorsadaada oo qoran loo isticmaali karo oo keliya;
(g) Ruqsadaha Isticmaalayaasha Badan: daabacaadda 6 nuqul oo mid kasta oo ka mid ah maaddooyinka koorsadaada qoran oo keliya loogu talogalay isticmaalkaaga; iyo
(h) Xayiraadaha daabacaadda ee Ruqsadaha ma khuseeyaan sameynta qoraallo ujeeddooyin waxbarid ah. Xaaladahan markay tahay 1000 xadka ardayga ayaa khuseeya.
6.4 "Isticmaalka la mamnuucay" ee qalabkaaga koorsada waa:
(a) daabacaadda, iibinta, shatiyeynta, liisan-siinta, kireynta, wareejinta, gudbinta, baahinta, qaybinta ama dib-u-qaybinta maaddooyinka koorsada (ama qayb ka mid ah) qaab kasta ha noqotee;
(b) adeegsiga shay kasta oo kooras ah (ama qayb ka mid ah) qaab kasta oo sharci darro ah ama ku xadgudbaya xuquuqda qof kasta oo sharciyeed sida uu dhigayo sharci kasta oo khuseeya, ama si kasta oo xadgudub ah, anshax xumo ah, takoorid ama diidmo kale ah;
(c) adeegsiga shay kasta oo koorso ah (ama qayb ka mid ah) si uu noolala tartamo, si toos ah ama si dadbanba; iyo
(d) adeegsi kasta oo ganacsi oo ah soo dejin kasta (ama qayb ka mid ah). Qaybtani kama xadidayso gudbinta casharrada ku saleysan agabyada, iyadoo la siinayo in waxna ka jirin Qeybtaan 6.4 oo ka mamnuuci doonta ama ka xaddidi doonin adiga ama qof kale inaad sameyso fal kasta oo si cad loogu oggol yahay sharciga khuseeya.
6.5 Waxaad noo damaanad qaadaysaa inaad marin u leedahay nidaamyada kombiyuutarka ee lagama maarmaanka ah, nidaamyada warbaahinta, softiweerka iyo isku xirnaanta shabakadaha si aad u hesho oo aad ugu raaxaysato faa'iidada qalabkaaga koorsada ah.
6.6 Dhammaan xuquuqda lahaanshaha aqooneed iyo xuquuqda kale ee ku jira maaddooyinka koorsada ee aan si cad u oggolaan Shuruudaha iyo Shuruudaha ayaa halkan lagu keydiyay.
6.7 Waa inaad haysataa, oo waa inaadan tirtirin, qarin ama ka saarin, ogeysiisyada xuquuqda daabacaadda iyo ogeysiisyada kale ee lahaanshaha ee ku jira ama maaddooyinka koorso kasta.
6.8 Xuquuqda lagu siiyay shuruudahan iyo shuruudahan waa kuwo adiga shaqsi kuu ah. Waa inaadan u oggolaan koox kale oo saddexaad inay adeegsato xuquuqdan. Xuquuqda lagu siiyay Liisanka Isticmaalaha Isticmaalayaasha Badan oo ku xaddidan hay'adda wax iibsiga ama cidda. Waa inaadan u oggolaan koox kale oo saddexaad inay adeegsato xuquuqdan.
6.9 Xadka isticmaalka agabkan waxaa lagu xadiday 1000 arday Liiskiiba.
6.10 Haddii aad jebiso qodob ka mid ah Shuruudahaan iyo Shuruudahaan, ka dib Shatiga lagu qeexay Qeybtan 6 si otomaatig ah ayaa looga joojinayaa jabinta noocaas ah.
6.11 Waad joojin kartaa Shatiga lagu qeexay Qeybtan 6 adoo tirtiraya dhamaan nuqulada agabyada koorsada la xiriira ee aad haysato ama aad gacanta ku hayso.
6.12 Markaad Joojiso Ruqsadda Qaybta 6aad, waa inaad, haddaadan hore u sameyn, si dhakhso ah oo aan laga soo kaban karin uga tirtirto nidaamyada kombuyuutarkaaga iyo aaladaha kale ee elektaroonigga ah dhammaan nuqulada agabyada koorsada la xiriira ee aad haysato ama aad gacanta ku hayso, iyo si joogto ah baabi'iyaan nuqullo kale oo ka mid ah maaddooyinka koorsada ku habboon ee aad haysato ama gacanta ku hayso.
7. Qandraasyada Fogaanta: saxitaanka saxda ah
7.1 Qeybtan 7aad waxay khuseysaa haddii kaliya ay tahay haddii aad na siiso qandaraas, ama aad qandaraas nala gasho, macaamil ahaan - taas oo ah, shaqsi si buuxda u dhaqmaya ama inta badan ka baxsan ganacsigaaga, ganacsigaaga, farsamadaada ama xirfaddaada.
7.2 Waad ka noqon kartaa dalab ah inaad qandaraas nala gasho websaydhkayaga, ama waad kansali kartaa qandaraaska aad nala gashay ee ah degelkeenna, wakhti kasta oo ka mid ah muddadaas:
(a) laga bilaabo gudbinta dalabkaaga; iyo
(b) ku eg dhamaadka 14 maalmood kadib maalinta heshiiska la galay, iyadoo la raacayo Qeybta 7.3. Khasab kuguma aha inaad bixiso sabab kasta oo ka noqoshadaada ama joojintaada ah.
7.3 Waad oggoshahay inaan bilaabi karno bixinta maaddooyinka koorsada ka hor dhammaadka muddada ku xusan Qaybta 7.2. Waad qiraysaa in, haddii aan bilowno bixinta maaddooyinka koorsada ka hor dhammaadka muddadaas, waxaad waayi doontaa xaqa aad u leedahay inaad kansasho oo ku xusan Qaybta 7.2.
7.4 Si aad uga laabato dalab ah qandaraas ama aad kansasho qandaraas ku saleysan sida lagu qeexay Qeybtan 7, waa inaad nagu soo wargelisaa go'aankaaga ka noqoshada ama joojinta (sida kiisku noqon karo). Waxaad nagu soo wargelin kartaa adigoo adeegsanaya qoraal kasta oo cad oo dejinaya go'aanka. Xaalada joojinta, waxaad nagu soo wargelin kartaa adiga oo isticmaalaya badhanka 'Amarada' ee ku yaal bogga Koontada. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad bilowdo nidaam laguu soo celinayo iibsashadaada. Si aad ula kulanto waqtiga kama-dambeysta ah ee lagaa joojinayo, waa kugu filan tahay inaad u dirto xiriirkaaga ku saabsan ku-dhaqanka ee ah xaq u lahaanshaha joojinta ka hor inta uusan dhicin waqtiga tirtirku.
7.5 Haddii aad kansasho amar ku saleysan sida lagu qeexay Qeybtan 7, waxaad heli doontaa lacag celin buuxda oo ah qadarkii aad na siisay iyadoo la tixraacayo amarka. Haddii aadan wax lacag ah bixin si aad amarka u buuxiso, lacagna laguuma soo celin doono.
7.6 Waxaan lacag kusoo celin doonaa anagoo isticmaaleyna isla qaabkii loo adeegsaday bixinta, ilaa aad si cad u ogolaatay mooyee. Sikastaba xaalku ha ahaadee, wax lacag ah oo lagaa qaadi maayo lacagta celinteeda darteed.
7.7 Waxaan usameyn doonaa dib u celintaada adiga dartiis natiijada ka-noqoshada iyadoo lagu saleynayo sida ku qeexan Qeybtaan. baajinta.
7.8 Marka lacag celin la codsado oo la ogolaado, dhamaan soo dejinta aan la isticmaalin waa la joojinayaa.
8. Garantiyo iyo wakiillo
8.1 Waxaad damaanad qaadeysaa oo aad noo meteleysaa in:
(a) aad sharci ahaan awood u leedahay inaad gasho qandaraasyo ku qabanaya;
(b) inaad leedahay awood buuxda, awood iyo karti aad ku ogolaato Shuruudahaan iyo Shuruudahan; iyo
(c) dhammaan macluumaadka aad na siiso ee la xiriira amarkaaga waa run, sax, dhammaystiran, hadda iyo marin habaabin.
8.2 Waxaan kuu damaanad qaadeynaa in:
(a) qalabkaaga koorsada wuxuu noqon doonaa tayo lagu qanco;
(b) qalabkaaga koorsada waxay si macquul ah ugu habboonaan doonaan ujeeddo kasta oo aad na ogeysiiso ka hor inta aan la gaarin qandaraas hoosta Shuruudaha iyo Xaaladahan;
(c) maaddooyinka koorsadaada waxay u dhigmayaan sharraxaad kasta oo aan ka bixinno adiga; iyo
(d) waxaan xaq u leenahay inaan ku siino qalabkaaga koorsada.
8.3 Dhammaan damaanad-qaadyadeena iyo wakiilladayada la xiriira maaddooyinka koorsada waxaa lagu qeexay Shuruudaha iyo Xaaladahan. Ilaa inta ugu badan ee uu oggol yahay sharciga la adeegsan karo oo ku xiran Qeybta 9.1, dhammaan damaanadaha kale iyo wakiillada si cad ayaa looga reebay.
9. Xaddidaadaha iyo ka-reebitaanka mas'uuliyadda
9.1 Waxba kuma jiraan Shuruudahaan iyo Shuruudahaan:
(a) xaddidaa ama ka reebtaa mas'uuliyadda kasta ee dhimashada ama dhaawaca shaqsiyeed ee ka dhasha dayacaadda;
(b) xaddidaa ama ka reebtaa mas'uuliyadda khayaanada ama been-abuurka been abuurka ah;
(c) xaddido wax kasta oo deyn ah si kasta oo aan loo oggolayn sharciga ku habboon; ama
(d) ka reebto wixii deyn ah oo aan laga reebi karin sharciga quseeya, iyo, haddii aad tahay macmiil, xuquuqdaada qaanuunka kama reebi doono ama kuma xadidi doono Shuruudahaan iyo Shuruudahaan, illaa inta sharcigu oggol yahay.
9.2 Xaddidnaanta iyo ka-reebnaanta mas'uuliyadda ee lagu qeexay Qeybtan 9 iyo meelo kale oo ka mid ah Shuruudaha iyo Shuruudaha:
(a) waxay ku xiran yihiin Qeybta 9.1; iyo
(b) xukumaan dhammaan deymaha ka dhasha Shuruudaha iyo Shuruudaan ama la xiriira mowduuca Shuruudaan iyo Shuruudahan, oo ay ku jiraan waajibaadka ka soo baxa qandaraaska, qaanuunka (oo ay ku jirto dayacaad) iyo jebinta waajibaadka sharciga, marka laga reebo ilaa inta si cad loo bixiyay kuwan.
9.3 Annaga masuul kama noqon doonno wixii ku saabsan wixii khasaaro ah ee ka dhasha dhacdo kasta ama dhacdooyin ka baxsan awooddeenna macquul ah.
9.4 Annagu masuul kama noqon doonno wixii khasaare ganacsi ah, oo ay ka mid yihiin (aan xad lahayn) luminta ama dhaawaca macaashka, dakhliga, dakhliga, isticmaalka, wax soo saarka, keydka la filayo, ganacsiga, qandaraasyada, fursadaha ganacsi ama niyad sami.
9.5 Annagu masuul kama noqon doonno wixii ku saabsan lumitaan ama musuqmaasuq kasta oo xog, xog-ururin ama softiweer ah, iyadoo la siinayo haddii aad qandaraas nala gasho iyadoo la raacayo Shuruudahaan iyo Shuruudahaan macaamiil ahaan, Qeybtan 9.5 ma khuseyso.
9.6 Annagu masuul kama noqon doonno annaga oo ixtiraameyna waxyeello gaar ah, mid aan toos ahayn ama khasaaro ama waxyeello ah, iyadoo la siinayo haddii aad qandaraas nala gasho iyadoo la raacayo Shuruudahaan iyo Shuruudahaan macaamiil ahaan, Qeybtan 9.6 ma khuseyso.
9.7 Waad oggoshahay inaan dano ka leenahay yareynta mas'uuliyadda shaqsiyadeed ee saraakiisha iyo shaqaalaha. Sidaa darteed, markaad tixgeliso xiisahaas, waxaad qiraysaa inaan nahay hay'ad xaddidan oo xaddidan; waad ku raacsan tahay inaadan la imaan doonin wax sheegasho shaqsi ah oo ka dhan ah saraakiisheena ama shaqaalaheena wixii qasaaro ah ee ku soo gaara shabakada ama Shuruudahan iyo Shuruudahan (tani ma, dabcan, ma xadeyn doonto ama ka reebi doonto mas'uuliyada hay'ada xaddidan ficillada iyo dayacaadda saraakiisheenna iyo shaqaalaheenna).
9.8 Mas'uuliyaddayada wadarta guud ee aan adiga kaa siinayno ee ku saabsan qandaraas kasta oo aan kugu siineyno adeegyo hoos yimaada Shuruudahaan iyo Shuruudahaan kama badnaan doonaan kuwa waaweyn:
(a) £ 100.00; iyo
(b) wadarta qadarka la bixiyay oo laynagu siin karo qandaraaska.
(c) haddii aadan wax lacag ah ku bixin si aad u soo dejiso agabkeenna, markaa mas'uuliyaddayada guud ee wadarta ah ee adiga lagaa doonayo ee ku saabsan qandaraas kasta oo lagu bixinayo adeegyada waxaa lagu dejinayaa 1.00 XNUMX.
10. Kala duwanaansho
10.1 Waxaan dib u eegi karnaa Shuruudahaan iyo Shuruudahaan waqti ka waqti anagoo ku daabacnayna nooc cusub boggayaga internetka.
10.2 Dib u eegis lagu sameeyo Shuruudahaan iyo Shuruudahan ayaa lagu dabaqi doonaa qandaraasyada la galay waqti kasta oo ka dambeysa waqtiga dib u eegista laakiin ma saameyn doonto qandaraasyada la sameeyay ka hor waqtiga dib u eegista.
11.1 ku hoos jira Shuruudaha iyo Shuruudaha.
11.2 Waxaa laga yaabaa inaadan la'aanteed ogolaanshaheena qoran ee hore, wareejin, qandaraas-hoosaad ama haddii kale aanad la macaamilin mid ka mid ah xuquuqdaada iyo / ama waajibaadkaaga sida hoos timaada Shuruudaha iyo Xaaladahan.
12. Wax dhaafid lahayn
12.1 Wax jabis ah oo ku saabsan qodob kasta oo qandaraas ah oo hoos imanaya Shuruudahaan iyo Shuruudahaan laga dhaafi maayo marka laga reebo ogolaansho qoraal ah ee kooxda aan jebin.
12.2 Ka dhaafida jebin kasta oo jabinta qodob kasta oo qandaraas ah oo hoos imanaya Shuruudahaan iyo Shuruudahan waxaa loo qeexi doonaa ka-dhaafitaan sii socosho oo ah jabinta kale ee qodobkaas ama jebinta qodob kale oo qandaraaskaas ka mid ah.
13.1 Haddii bixinta shuruudahaan iyo shuruudahan ay go'aamiso maxkamad kasta ama hay'ad kale oo awood u leh inay sharci darro tahay iyo / ama aan la fulin karin, qodobada kale way sii socon doonaan.
13.2 Haddii wax sharci darro ah iyo / ama bixin aan la fulin karin ah oo ka mid ah Shuruudahaan iyo Shuruudaan ay noqoneyso mid sharci ah ama la dhaqan gelin karo haddii qeyb ka mid ah la tirtiro, qeybtaas waxaa loo qaadan doonaa in la tirtiray, inta hartayna waxay sii socon doontaa dhaqan galkeeda.
14. Xuquuqda xisbiga saddexaad
14.1 Qandaraas hoosta Shuruudahaan iyo Shuruudahaan waa mid annaga iyo annaga naga faa'iideysan. Looguma talagalin inay ka faa'iideysato ama ay dhaqan geliso cid saddexaad.
14.2 Ku dhaqanka xuquuqda labada dhinac ee qandaraaska ku xusan Shuruudahaan iyo Shuruudahan kuma xirna ogolaanshaha dhinac saddexaad.
15. Heshiis dhan
15.1 Iyadoo la raacayo Qeybta 9.1, Shuruudahaan iyo Shuruudahaan waxay ka koobnaan doonaan dhamaan heshiiskii na dhexmaray adiga iyo annaga ee ku saabsan iibka iyo iibsiga soo dejinta (oo ay ku jiraan soo degsasho bilaash ah) iyo adeegsiga soo degsashadaas, waana inay ka sarreysaa dhammaan heshiisyadii hore ee idinka iyo anaga laxiriirno iibka iyo iibsiga soo degsigeena iyo isticmaalka dajintaas.
16. Sharciga iyo xukunka
16.1 Shuruudahaan iyo Shuruudahaan waxaa lagu xukumi doonaa oo loo qaabeyn doonaa si waafaqsan sharciga Scotland.
16.2 Wixii khilaafaad ah ee la xiriira Shuruudahaan iyo Shuruudahaan waxaa lagu xukumayaa awooda gaarka ah ee maxkamadaha Scotland.
17. Shaacinta sharciga iyo sharciyeynta
17.1 Ma fayl gareyn doono nuqul ka mid ah Shuruudahaan iyo Shuruudahaan si gaar ah ula xiriirta isticmaale kasta ama macaamil kasta. Haddii aan cusbooneysiino Shuruudahaan iyo Shuruudahaan, nooca aad markii hore ku raacday mar dambe lagama heli doono degelkeenna. Waxaan kugula talineynaa inaad tixgeliso inaad keydiso nuqul ka mid ah Shuruudahaan iyo Xaaladahan tixraaca mustaqbalka.
17.2 Shuruudahaan iyo shuruudahan waxaa lagu heli karaa oo kaliya luuqada Ingiriiska. In kasta oo GTranslate laga heli karo degelkeenna, wax masuuliyad ah iskama saarin tayada tarjumaadda Xeerarkan iyo Shuruudaha ay fulisay xaruntaas. Nooca luqadda Ingiriisiga waa nooca keliya ee sharci ahaan lagu dabakhi karo.
17.3 Kama diiwaan galineyno VAT.
17.4 Websaytka Midawga Yurub ee xalinta khilaafaadka khadka tooska ah ayaa laga heli karaa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. Barxadda xallinta khilaafaadka ee khadka tooska ah waxaa loo isticmaali karaa xallinta khilaafaadka.
18.1 Degelkan waxaa iska leh oo maamula Hay'adda 'Reward Foundation'.
18.2 Waxaan ka diiwaangashan nahay Scotland sidii Hay'ad Iskudhis ah oo loo yaqaan 'Scottish Charitable Incorporated Organisation' oo hoos timaada nambarka diiwaangelinta SCO 44948. Xafiiskayaga diiwaangashan wuxuu ku yaal The Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR, Scotland, UK.
18.3 Goobtayada ugu muhiimsan ee ganacsiga waa The Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR, Scotland, UK.
18.4 Waad nala soo xiriiri kartaa:
(a) boostada, adoo adeegsanaya cinwaanka boostada ee kor ku xusan;
(b) adeegsiga foomka xiriirka websaydhkayaga https://rewardfoundation.org/contact/;
(c) telefoon ahaan, lambarka xiriirka ee lagu daabaco degelkeenna waqti ka waqti; ama
(d) emayl ahaan, adoo adeegsanaya contact@rewardfoundation.org.
Nooca - 21 Oktoobar 2020.